OTU ESI EME AKWUKWO NA PUBLISHER - ESI MEE - 2019
Ịmepụta akwụkwọ nta na Nnabata
Microsoft Publisher bụ usoro dị ukwuu maka ịmepụta ihe dị iche iche. Tinyere iji ya, ị nwere ike ịmepụta broshuọ dị iche iche, akwụkwọ edemede, kaadị azụmahịa, wdg. Anyị ga-agwa gị otu esi emepụta akwụkwọ nta na Publisher
Nbudata ngwa ngwa nke Microsoft Publisher
Gbaa usoro ihe omume a.
Otu esi eme akwukwo na Publisher
Mpido oghere bụ foto na-esonụ.
Iji mee akwụkwọ nta mgbasa ozi, o doro anya na ịchọrọ ịhọrọ ụdị "Akwụkwọ" dị ka ụdị akwụkwọ.
Na ihuenyo ọzọ nke usoro ihe omume ahụ, a ga-akpali gị ịhọrọ template kwesịrị ekwesị maka akwụkwọ nta gị.
Họrọ template ịchọrọ ma pịa bọtịnụ "Mepụta".
Akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ ahụ juputara na ozi. Ya mere, ịkwesịrị iji dobe ya dochie ya. N'elu mpagharakspace ahụ, e nwere ndị nduzi nke na-egosi akara nke akwụkwọ nta ahụ n'ime 3 ogidi.
Iji tinye akara na akwụkwọ nta ahụ, họrọ iwu menu Tinye> Ndebanye aha.
Kọwaa ebe na mpempe akwụkwọ ebe ịkwesịrị ịtinye aha ahụ. Dee ederede achọrọ. Nchịkọta ederede bụ otu ihe ahụ dị na Okwu (site na menu n'elu).
Etinye foto a n'otu ụzọ ahụ, ma ịkwesịrị ịhọrọ ihe nhọrọ menu Tinye> Foto> Site na faịlụ ma họrọ foto na kọmputa.
Enwere ike ịhazi foto a mgbe ịtinye site na ịgbanwe agbanwe ya na agba.
Onye nkwusa na-enye gị ohere ịgbanwe agba agba nke akwụkwọ nta. Iji mee nke a, họrọ ihe ndepụta menu> Dezie.
Ụdị maka nhọrọ ndabere ga-emeghe na windo ekpe nke usoro ihe omume ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtinye foto nke gị dị ka ndabere, họrọ "Ụdị ndabere ọzọ". Pịa taabụ "Edebe" ma họrọ oyiyi achọrọ. Kwenye nhọrọ gị.
Mgbe ịmepụtara akwụkwọ nta, ị ga-ebipụta ya. Gaa na ụzọ na-esonụ: Njikwa> Bipute.
Na windo nke gosipụtara, dee ihe ndị a chọrọ ma pịa bọtịnụ "Bipute."
Akwụkwọ edemede dị njikere.
Hụkwa: Mmemme ndị ọzọ maka ịmepụta akwụkwọ
Ugbu a ị maara otú e si mepụta akwụkwọ nta na Microsoft Publisher. Mpempe akwụkwọ nkwado ga-enyere aka ịkwalite ụlọ ọrụ gị ma mee ka ọ dị mfe ịnyefe ya ozi na ya.